Alshabaab: Hadafkeena koowaad waa xildhibaanada iyo maxkamadaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab: Hadafkeena koowaad waa xildhibaanada iyo maxkamadaha
A warsame 23 April 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Dheere ayaa sheegay iney sii wedayaan beegsiga xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, xilli labadii maalmood ee lasoo dhaafay Muqdisho lagu dilay labo xildhibaan mid kalana la dhaaqacay.
Afhayeenka Alshabaab oo la hadlay warbaahinta iyaga taaagreeta ayaa sheegay in hadafkooda koowaad uu yahay xildhibaanada iyo dadka ka shaqeeya garsoorka.
“Hafafkeenna koowaad waa kuwa sheeganaya sharci dejinta iyo kuwa u adeega ee ah maxkadaha” ayauu yiri afhayeenka Alshabaab, Cali Dheere.
Alshabaab ayaa sanad ka hor weerar in ka badan 50 qof ku dhimatay ku qaaday xarrunta maxkamadda gobolka Banaadir, waxeyna weli ku hanjabayaan iney beegsanayaan baarlamaanka iyo shaqaalaha garsoorka.
21-kii bishaan April, Alshabaab ayaa qarax gaari degmada Xamarweyne ku dilay xildhibaan Isxaaq Maxamed Ibraahim, waxaana isla qaraxaas ku dhaawacmay xildhibaan kale oo lagu magacaabo Maxamed Cali Dhuux iyo 2 qof kale oo rayid ah, halka shalay oo aheyd 22-ka April Alshabaab markale degmada Dharkeynley ku dileen xildhibaan kale oo la oranjiray C/caziiz Isxaaq Mursal.
Support Somali state or risk takeover’
Wiil Soomaali ah oo halis galay kadib markii uu ku dhuuntay lugaha diyaarad socotay 5 saacadood